Amin’ny maha raiamandreny sy amin’ny maha Malagasy ahy no ahatongavako aty Vohipeno, hoy izy. Mila mitandrina isika mba tsy horebireben’ny asa fanakorontanana, hoy ny filoha. Aoka isika tsy hiroboka amin’ny famonoan’olona sy ny famotehana ny fananana iombonana. Manohitra mafy ny fitsaram-bahoaka sady manameloka izany ny filoham-pirenena. Izay vao nandrenesam-peo ofisialy ny mpitantana ny firenena taorian’ny fitsaram-bahoaka efa nahafatesana olona maromaro. Anisan’ny distrika faran’ny mahantra indrindra eto Madagasikara i Vohipeno. Nampanantena ny filoham-pirenena fa hotohizana ny ezaka ho fanampiana ny mponina any an-toerana tahaka ny fanorenana toeram-pitsaboana sy ny fametrahana fotodrafitrasa hanamora ny asa famokarana. Omaly moa no nizarana ny vatsin’ankohonana sy Ndao hianatra tany an-toerana. Tetikasa tohanan’ny Unicef sy ny Banky Iraisam-pirenena izy ireo mba hanampiana ireo tena mahantra fadiranovana, indrindra fa ny renim-pianakaviana sy ny ankizy. Ny renim-pianakaviana no mandray ny vatsin’ankohonana ka isaky ny roa volana ny fizarana azy ary manodidina ny 20 000 ka hatramin’ny 40 000 Ar no vola azo amin’izany. Distrika 6 nosokajiana ho tena sahirana indrindra eto Madagasikara no voakasiky ny tetikasa ka tokantrano 39 000 no mahazo tombontsoa mivantana aminy. Tohana ara-bola ho an’ny ankizy mpianatra 2 isaky ny fianakaviana sahirana kosa ny Ndao Hianatra. 10 000 ka hatramin’ny 20 000 Ar no azon’ny ankizy tsirairay avy amin’izany.